Skycoin စျေး - အွန်လိုင်း SKY ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Skycoin (SKY)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Skycoin (SKY) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Skycoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $8 833 123.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Skycoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Skycoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
SkycoinSKY သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.62SkycoinSKY သို့ ယူရိုEUR€0.524SkycoinSKY သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.472SkycoinSKY သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.564SkycoinSKY သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr5.51SkycoinSKY သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.3.9SkycoinSKY သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč13.67SkycoinSKY သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł2.3SkycoinSKY သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.821SkycoinSKY သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.865SkycoinSKY သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$13.65SkycoinSKY သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$4.8SkycoinSKY သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$3.33SkycoinSKY သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹46.42SkycoinSKY သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.104.67SkycoinSKY သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.85SkycoinSKY သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.946SkycoinSKY သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿19.29SkycoinSKY သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥4.31SkycoinSKY သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥66.02SkycoinSKY သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩735.63SkycoinSKY သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦239.45SkycoinSKY သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽45.26SkycoinSKY သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴16.95
SkycoinSKY သို့ BitcoinBTC0.00005 SkycoinSKY သို့ EthereumETH0.00162 SkycoinSKY သို့ LitecoinLTC0.0114 SkycoinSKY သို့ DigitalCashDASH0.00683 SkycoinSKY သို့ MoneroXMR0.00696 SkycoinSKY သို့ NxtNXT48.36 SkycoinSKY သို့ Ethereum ClassicETC0.0914 SkycoinSKY သို့ DogecoinDOGE178.93 SkycoinSKY သို့ ZCashZEC0.00753 SkycoinSKY သို့ BitsharesBTS19.1 SkycoinSKY သို့ DigiByteDGB19.84 SkycoinSKY သို့ RippleXRP2.2 SkycoinSKY သို့ BitcoinDarkBTCD0.0214 SkycoinSKY သို့ PeerCoinPPC2.06 SkycoinSKY သို့ CraigsCoinCRAIG282.52 SkycoinSKY သို့ BitstakeXBS26.44 SkycoinSKY သို့ PayCoinXPY10.82 SkycoinSKY သို့ ProsperCoinPRC77.8 SkycoinSKY သို့ YbCoinYBC0.000333 SkycoinSKY သို့ DarkKushDANK198.99 SkycoinSKY သို့ GiveCoinGIVE1342.99 SkycoinSKY သို့ KoboCoinKOBO141.26 SkycoinSKY သို့ DarkTokenDT0.571 SkycoinSKY သို့ CETUS CoinCETI1790.91
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Fri, 14 Aug 2020 14:50:01 +0000.